Izindaba - Indima yokufakwa kwempahla
Ngokuvamile, umkhiqizo ungaba namaphakeji amaningana. Isikhwama somuthi wokuxubha esiqukethe umuthi wokuxubha imvamisa sinebhokisi ngaphandle, futhi ibhokisi lekhadibhodi kufanele libekwe ngaphandle kwebhokisi ukuze lithuthwe futhi liphathwe. Ukupakisha nokuphrinta ngokuvamile kunemisebenzi emine ehlukene. Namuhla, umhleli weChina Paper Net uzokuthatha ukuthi ufunde kabanzi ngokuqukethwe okufanele.
(1) Le yindima ebaluleke kakhulu. Kusho ukuvikela izimpahla ezihlanganisiwe ezingozini nasemonakalisweni njengokuvuza, imfucuza, ukweba, ukulahleka, ukusakazeka, ukuphambuka, ukuncipha, nokuguqulwa kombala. Ngesikhathi kusuka ekukhiqizweni kuze kusetshenziswe, izindlela zokuzivikela zibaluleke kakhulu. Uma ukufakwa kungakwazi ukuvikela okuqukethwe, lolu hlobo lokupakisha luhlulekile.
(2) Nikeza lula. Abenzi, abathengisi, kanye namakhasimende kufanele bahambise imikhiqizo ukusuka kwenye indawo iye kwenye. Umuthi wamazinyo noma izipikili zingahanjiswa kalula endlini yokugcina impahla ngokuzifaka emabhokisini. Ukupakisha okungahambi kahle kwamakhukhamba kanye ne-powder yokuwasha kuthintwe okuncane okukhona manje okufakwa esikhundleni sokupakisha; ngalesi sikhathi, kulula kakhulu ukuthi abathengi bathenge futhi bagoduke nabo.
(3) Ukuhlonza, imodeli yomkhiqizo, ubuningi, uphawu negama lomkhiqizi noma umthengisi kufanele kuboniswe kupakethe. Ukupakisha kungasiza abaphathi bendawo yokugcina impahla ukuthola imikhiqizo ngokunembile, futhi kungasiza abathengi ukuthi bathole abakufunayo.
(4) Thuthukisa ukuthengiswa kwemikhiqizo ethile, ikakhulukazi ezitolo ezizikhethele zona. Esitolo, ukupakisha kudonsela ukunaka kwekhasimende futhi kungenza ukunaka kwakhe kube nesithakazelo. Abanye abantu bacabanga ukuthi “wonke amabhokisi okupakisha ayibhodi lezikhangiso.” Ukupakisha okuhle kungakhuphula ukuheha komkhiqizo omusha, futhi inani lophakeji uqobo lungashukumisela abathengi ukuthi bathenge umkhiqizo othile. Ngaphezu kwalokho, ukwandisa ukuheha kokupakisha kushibhile kunokukhuphula intengo yeyunithi yomkhiqizo.